कलियुगका कुरा: घरबेटी असल भए घर थपिन्थेनन्
Sunita Giri, Shambhu Ojha, Ishwor Lamichhane and 32 others like this.
Arjun Subedi पढन्दास संगिनीहरुसित संगत भएपछि त यस्ता मर्मस्पर्सी कुरा थाहा पाइँदो रैछ। आफ्नो त कुनै संगि संगिनीले पनि यस्ता मर्मस्पर्सी कुरा गर्ने होइनन्, कुरा गरिहाले पनि सधै हावा-हावा मात्र ।
Panthi Dhruba यो स्टाटस आफैँमा मर्मस्पर्शी छ, तर के गर्ने घरबेटीहरुका पनि आफ्नै समस्या होलान् ...
Ram Baral तपाइ पनि त घरभेटी हो नि ! सङी ले नभएपनी सङिनिले बस्ने ठाउ नपाउदा welcome नगरी के हेरेर बस्नु भाको त ?
Raj Paudel dipak bhattrai!!kantipur...thank`s.....sala ktm ka ghaar beti pani...prachnde,rame,kp,madhe haru jastai jallad ta hun ni...1 choti earthquake aaunu parne ho ktm ma...